Navigation & အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Maps ကို Sygic GPS | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » Navigation & အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Maps ကို Sygic GPS
Navigation & အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Maps ကို Sygic APK ကို GPS
Sygic အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာ့အများဆုံး installed TomTom ကနေအခမဲ့ 3D အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများနှင့်အတူ Android အတွက် Real-time အသွားအလာနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းဂျီပီအက်စ်အညွှန်း app ကို။ Sygic ထံမှကောက်ယူဒေတာတွေနဲ့အရှိဆုံးတိကျ Real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်ကမ်းလှမ်း 500 သန်းအသုံးပြုသူများသည်ကမ္ဘာ့အကျယ်ကမ္ဘာ့မော်တော်ကား, မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ, မြေပုံ & အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်ပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
• TomTom နှင့်အခြားပံ့ပိုးပေးရာမှကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအားလုံး၏အော့ဖ်လိုင်းဖြင့်မြေပုံများ,
•တိကျသောလမ်းညွန်နှင့်ပြောပြီလမ်းအမည်များနှင့်အတူ Voice ကို-guided ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
• * ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 500 သန်းအသုံးပြုသူများထံမှစုဆောင်းဒေတာတွေနဲ့အရှိဆုံးတိကျ Real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုရှောင်ကြဉ်ပါ
•အဆင့်မြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး features တွေကိုပိုမိုလွယ်ကူကျွမ်းတဝင်မရှိသောနယ်မြေများတွင်ကားမောင်းအောင်
• Dynamic လိန်းလက်ထောက်မှန်ကန်သောလမ်းသွားသို့သငျသညျလမျးညှနျ
• head-up display (HUD) ** ပိုလုံခြုံညအချိန်တွင်မောင်းနှင်အောင်, သင့်ကားရဲ့ကားရှေ့မှနျပေါ်သို့အညွှန်းမှန်းချက်ရဲ့
• Dashcam ** ရှေ့ဆက်လမ်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်မတော်တဆမှု၏အမှု၌ကိုဗီဒီယိုကယ်တင်
•ရီးရဲလ်ကြည့်ရန် Navigation ** ပင်ပိုကောင်းနှင့်ဘေးကင်းမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုတိုးပွားအဖြစ်မှန် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
•အချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းကြောင်းခွဲဝေမှု * သင်ကမြေပုံပေါ်တွင်ရောက်ရှိ & လက်ရှိအနေအထားသင့်ရဲ့ခန့်မှန်းအချိန်ကိုမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်
ယာဉ်ရပ်နားရာအရပျအကြံပြုချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက်အင်ဖိုနှင့်အတူအလွယ်တကူ•ပန်းခြံ *
•သင့်လောင်စာအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်မည်နှင့်လောင်စာစျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းတက်သည်ဖြည့်ပါ *
သငျသညျတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး7နေ့ရက်ကာလအဘို့လူကြိုက်အများဆုံးကမ္ဘာ့ဖလား + ယာဉ်အသွားအလာလိုင်စင်အတွက်ရရှိနိုင်သမျှသော features တွေမောင်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။7ရက်အကြာမှာသင်အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သက်တာပရီမီယံလိုင်စင်မှ upgrade ။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသင့်, sygic.com/support သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့7ရက်တစ်ပတ်ကဒီမှာရှိပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်ထားခဲ့ပါသို့မဟုတ် sygic.com/love မှာစကားလုံးပျံ့နှံ့ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
* ဒီ feature အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်သတိပြုပါ။
** ဤ add-on ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါရပ်ကိုသင် eshop.sygic.com/en/ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုထွက်စစျဆေးနိုငျ
မှတ်ချက်: Dashcam ထံမှမျှဝေခြင်းဗီဒီယိုများသည်ဤတိုင်းပြည်များတွင်ဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသည်: သြစတြီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံ, လူဇင်ဘတ်, ဆွစ်ဇာလန်, လိုဗက်ကီးယား, စပိန်။
အထွေထွေဘာဂ် & စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
Navigation & အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Maps ကို Sygic GPS
32.59 ကို MB
ဧပြီလ 10, 2019 မှာ 8: 49 ညနေ
GPS navigation app ကိုစစျဆေးဖို့ Going
ဇူလိုင်လ 4, 2017 မှာ 10: 36 ညနေ
ငါသည်ငါ့ telfone အတွက်7အလုပ်အညွှန်းအော့ဖ်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုရှိသည်?
ဧပြီလ 3, 2015 မှာ 5: 30 ညနေ
သငျတို့သ app ကို wifi se chlta ဇ ky ... ဟို rha ဇအပေါ်မိုဘိုင်းဒေတာ se က q ni ... ။
plzzz ငါ့ကိုကူညီဖို့ ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2015 မှာ 4: 49 ညနေ
ကောင်းတဲ့ application ကို။
နိုဝင်ဘာလ 11, 2014 မှာ 12: 06 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 31, 2014 မှာ 4: 25 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 28, 2014 မှာ 4: 59 ညနေ
ငါမှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုဖို့ & ငါပေးမည်
Singh က says:
ဇူလိုင်လ 21, 2014 မှာ 12: 53 နံနက်
ဇူလိုင်လ 18, 2014 မှာ 3: 20 ညနေ
ဇူလိုင်လ 11, 2014 မှာ 4: 02 နံနက်
မတ်လ 16, 2014 မှာ 8: 47 ညနေ
Street ကွီး APP.AWESOME SHOW, တိုင်းအရာရာကရှင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စကား
မတ်လ 16, 2014 မှာ 5: 29 ညနေ
Himesh Shah က says:
ဇန်နဝါရီလ 22, 2014 မှာ 11: 42 နံနက်
OS ကို update လုပ်ပါကဒီမြေပုံအလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း
ငါသည်သူတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ကနေလိုင်စင်ရဗားရှင်းရဖို့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးဆောင် & စာအုပ်, Mark & ​​update ကိုအသေးစိတျမှနာကျင်မှုတွေအများကြီးခေါ်သွားတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း၏ OS ကို update လုပ်ခံခဲ့ရသောအခါ, အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဘူး။ ငါသည်သူတို့၏ထောက်ခံမှုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေဒါပေမဲ့သူတို့ OS ကို update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသူတို့ရဲ့ Maps ကိုအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး & သူတို့အစီအစဉ်အတွက်မဆို updated version ကိုမပေးမညျဖွစျကွောငျးကိုပြောသည်။
ဒါအများကြီးပေးဆောင် application ကိုအသုံးပြု!
စက်တင်ဘာလ 8, 2013 မှာ 6: 55 နံနက်
ဇူလိုင်လ 5, 2013 မှာ 12: 59 နံနက်